DELL Ultrabook oo leh GNU / Linux oo loogu talagalay Soo-saareyaasha | Laga soo bilaabo Linux
DELL Ultrabook oo leh GNU / Linux oo loogu talagalay Soo-saareyaasha
Charlie-brown | | GNU / Linux, Noticias
Ugu dambeyntii, war wanaagsan !. Horeba bishii May ee la soo dhaafay DELL ayaa lahayd lagu dhawaaqay bilowgii mashruucii Sputnik ee loogu talagalay in lagu hirgeliyo khad kombiyuutarrada gacanta lagu qaadan karo oo leh GNU / Linux sida caadiga ah, oo diiradda lagu saaray horumariyeyaasha sare u qaaday rajooyinka xilligaas; Hagaag, durba waa xaqiiqo maanta.
Shalay ayaa noticia en PCWorld, kaas oo daboolay kanaga furitaanka gudaha Mareykanka iyo Kanada. Qalabka la hadal hayo, oo leh magaca XPS 13 Developer Edition, Waa ultrabook leh shaashad 13-inch ah, processor i7 ah, 8GB oo RAM ah iyo 256GB disk adag oo adag, oo suuqa lagu galayo qiimo dhan $ 1,549 USD oo ay ku jiraan 1 sano oo taageero xirfadeed ah iyo inay ballanqaadayaan inay noqon doonaan laga heli karo suuqyo kale horaanta sanadka soo socda.
Sida laga soo xigtay DELL, qaabeynta iyo habeynta qalabkan, fikradaha tijaabiyayaashu waa la tixgeliyey, taas oo u oggolaatay iyaga inay gaaraan natiijo wanaagsan, dabcan, si loo gaaro tan waxay sidoo kale la shaqeeyeen Canonical iyo sidoo kale horumariyayaal kale.
Haddii ay jiraan wax igu dhiirrigelinaya warkan, waa in wax walba ay u muuqdaan inay tilmaamayaan in horumariyeyaasha isha furan ay durbaba u noqonayaan qayb suuq muhiim u ah kuwa waaweyn, taas oo u wanaagsan dhammaanteen innaga oo qaab ama qaab kale uga faa'iideysanayna GNU / Linux, iyadoon loo eegin waxa loo yaqaan 'distro' ee su'aasha laga qabo.
Markaa haddii aad si wanaagsan u dhaqantay sannadkan waxaad weydiisan kartaa Santa mid ka mid ah buugyarahan, ugu yaraan waxaan calaamadeynayaa nuqul ka mid ah qoraalkan si aan u arko haddii uu fiiro gaar ah u leeyahay ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » DELL Ultrabook oo leh GNU / Linux oo loogu talagalay Soo-saareyaasha
Aad u qaali ah, sidoo kale. Waan ogahay in qaar badani ay rabaan inay ii diraan saamiga, laakiin mid ayaa heli kara MacBook Air wax ka yar. Runtii waa wax lala yaabo. Ma ahan wax aan caadi aheyn Linus inuu mid xirto.
Waxay iga dhigeysaa qashin si aan u diyaariyo mashiin weyn oo aanan u dhigin kaarka muuqaalka!
Ka hubi qeexitaanka qalabka ee goobta DELL, ma aanan sameyn karin ama kuma dhajin karin xiriirka iyaga maxaa yeelay xiriirkeyga maanta waa mid aad u xun oo aysan aniga macquul ii ahayn. Sikastaba, taxaneyaasha taxanaha ah ee loo yaqaan 'XPS ultrabooks' waxay caadi ahaan leeyihiin muuqaallo qurxoon.
Waxaa loogu talagalay horumariyeyaasha, illaa iyo hadda ma aanan arag horumariye u baahan awood muuqaallo badan graphics
Ilaa hadda ma arag horumariye adeegsada Ubuntu! xD
Kuwo badan baa sameeya, runtiina kuwa aan ogahay badankood.
Ultrabook ahaan, way fiicantahay in la keeno intel hd 4000. Waxaa intaa dheer, looxyada intel waa kuwa ugu fiican ee lagu taageerayo Linux, darawallada ayaa jira waqti dheer ka hor inta aysan jajabku ku dhicin suuqa Intaas waxaa sii dheer, sawiradan jaantusyada ah waxay si fiican u qabtaan marka loo eego isticmaalka. , iyo Haddii aadan rabin inaad ciyaarto, uma baahnid wax intaa ka badan.
$ 1,549 USD? Ma runbaa inay uga qaalisan tahay Ubuntu kan Windows-ka wata?
gebi ahaanba run. Waxaan u maleynayaa inay tahay inay ka dhigto iibka hooseeya ee suurtogalka ah. Runtu waxay tahay, qiimahaas, waxaan ka sii fiicnaan lahaa inaan ku iibsado Windows, oo ka jaban, ka dibna, ku sagootiya daaqadaha.
Waxyaalahaas oo kale, weligay "kama liqin" ololahaas Dell ee loogu talagalay Linux ama Ubuntu ... waxay iibiyaan kombuyuutarro Linux ah oo loo malaynayo inay ka jaban yihiin laakiin maya, way ka qaalisan yihiin Windows, taasi waa ... WTF!
Laakiin taasi miyay tahay in daaqadaha ay ka jaban yihiin dhammaan barnaamijyada saddexaad ee maalgaliya, akhri adobe (flash, akhristaha), oracle (java), norton, iwm ...
Ku jawaab Xykyz
Waa wax iska soo horjeedda, dhammaan barnaamijyadaas ayaa ka dhigaya qiimaha qalabka inuu sare u kaco. Barnaamijkan lama siinayo lamana kafaala qaaday, wuu qaalisan yahay. Celcelis ahaan, ku dhowaad 10% wadarta qiimaha kumbuyuutarka ayaa ah waxa shatiyada software-ka ay xambaarsantahay ay mudan yihiin.
Kumbuyuutar aan ku xirnayn rukhsadaha softiweerka waa inuu ka jaban yahay, haddii kale, waxaa jira waxyaabo la yaab leh oo ku lug leh.
Xaaladahaas, waxa aan qiyaasayo inaysan rabin inay dhacaan ayaa ah in macaamilku uu arko farqiga u dhexeeya. Haddii kumbuyuutarku aad uga jaban yahay in aanu Windows-ku sidan isla qalabku, yaa kumbuyuutarka ku iibsan lahaa Windows? Ku dhowaad cidna. Shirkadda Dell ma xiiseyneyso in taasi dhacdo maxaa yeelay shirkadaha softiweerku kama kafaala qaadaan iibinta qalabka si uun, waxay ku bixiyaan liisankooda qiimo jaban oo ay wax ugu iibsadaan. Haddii Dell ay u heellan tahay iibinta qalabka iyadoon software-keedu jirin, shirkadahaas way joojin doonaan sicir-dhimistaas, qiimaha rukhsadaha ayaa sare u kacaya, taasoo macnaheedu noqon doono qiimaha qalabka ay wataan ama faa'iido yar oo ka hooseysa shirkadda Dell.
Taas oo, marka la soo koobo, ahayd khiyaano, waxay ku dalacayaan wax intaa ka badan, wax aan jirin.
Ku jawaab MIlti
Waan arki doonaa. Haddii shirkad sida norton ah lacag bixiso si ay uga dhex muuqato kumbuyuutar horay loo soo dejiyey oo ku saabsan qiyaastii X bilood tijaabo ah Qiimaha kumbuyuutarka waxaa loo yareyn karaa inuu noqdo mid tartan badan oo sidaas darteed norton waxay ku jirtaa boos wanaagsan oo loogu talagalay isticmaalaha inuu ka iibsado shati. Tani waxaa lagu kordhiyay rukhsado dhowr ah oo software ah waa waxa ogolaanaya hoos u dhaca qiimaha Microsoft-na waxay ku sameysaa xitaa barnaamijkeeda gaarka ah, waxay horay u sii diyaarisaa MS Office, Skype, iwm sidaasna waxay ku dhigeysaa boos mudnaan leh oo aakhirka ay ka faa'iideysaneyso
Laakiin maahan kafaalo qaadis ama hoos udhac, wadarta qiimaha qalabka marwalba wuu kordhayaa, halkii aad kaheli laheyd qiimaha buuxa ee rukhsadaha waxaad waxyar kayar bixinaysaa inaad ahaato mug iib ah, laakiin marna macnaheedu maahan hoos udhaca qiimaha qalabka laakiin waa wax iska soo horjeeda.
Maaha shirkadaha softiweerrada ee bixiya in lagu daro koox, had iyo jeer waxaa bixiya adeegsadaha, xitaa haddii aysan oggolaan inay u sheegaan inay lacag dheeraad ah qaadayaan.
Waxaa bixiya isticmaalaha go'aansada inuu bixiyo liisanka aan qiimeynta ahayn, iyo qiimaha ay leeyihiin, waxay faa'iido u tahay inay iyagu bixiyaan si loogu daro barnaamijka qiimeynta, maadaama ay si wax ku ool ah u bixiyaan dadka isticmaala ... kaliya ma wada aha.
Adoniz (@ dhabaraawe1) dijo
Jawaabtu waa mid aad u fudud.
Software-ka Bilaashka ah macnaheedu maahan Bilaash oo haduu ka qaalisan yahay Winbugs-ka sababtuna waa waxka badalka lagu sameeyay si ay ula jaanqaadaan dell, maadaama kaliya tijaabiyeyaashu aysan ka shaqeyn laakiin sidoo kale shaqaale dell, oo ay ka shaqeeyaan shirkad weyn oo ay tahay inay mushahar siiso shaqaalahaas, kaliya waxay daboolayaan kharashaadka dhabta ah maadaama waxa ay shirkaddu lafteeda ku kacdaa ay ka qaalisan tahay, si kasta oo ay u fududahay, halkii ay ku dhejin lahayd shirkado kale (flash, adobe, iwm.) Kuwaas oo intooda badan sameeya Shaqada oo way ka jaban tahay in la bixiyo marka la qabtay halkii aad adigu iskaa u qaban lahayd.Waa iska cadahay in aan ka hadlayo heerka shirkadda maaddaama heer shaqsiyeed ay tahay wax iska soo horjeedda.
Jawaab Adoniz (@ NinjaUrbano1)
Kuwa la yimaada daaqadaha waxay leeyihiin qeexitaano kale. Tani way ka qaalisan tahay maxaa yeelay waxay la timaaddaa qalab wanaagsan.
Si sax ah uma ahan marar badan nidaamka qalliinka ayaa qeexaya inuu ka qaalisan yahay ama ka jaban yahay badanaana had iyo jeer laptop-ka leh Linux wuxuu ka qaalisan yahay kan Windows, sida iska cad waxaad dhibaato yar ku qabtaa Linux. Waxaan u maleynayaa in qiimaha uu kor u kaco maxaa yeelay tayada sheyga ayaa sare u kacda.
Tan iyo subaxnimadii waxaan la imaaneynaa taxane dhaleeceyn iyo aflagaado ah oo ka dhan ah Dell, maadaama makiinadani ay $ 50 ka qaalisan tahay ubuntu marka loo eego W $. Sida muuqata waxay ku saabsan tahay heshiiskii M $ iyo Dell. Sida David oo ka socda EMSLinux ii sheegay, 8GB wan ayaa aad u badan (inaad gamer mooyee). Waxaan hayaa Dell XPS 15 oo leh 6 gigs oo Ram ah iyo shaqo horumarineed oo dheeri ah, aad bay iigu adag tahay inaan ka gudbo 3GB isticmaalka. Kombuyuutarku aad buu qaali u yahay. Dad badani waxay doorbidayaan inay badbaadiyaan $ 50, tirtirto W $ oo ay ku dhajiyaan waxyaabaha ay jecel yihiin.
Dadka ku jira DELL ma rabaan macaamilka inuu isbarbar dhigo. Ma dhigi karaan goobo isku mid ah inta udhaxeysa Windows iyo Ubuntu, kala duwanaanshaha qiimaha ee doorbidida Cannonical iyaga kuma haboona. Ma rabtaa GNU / LINUX? Noo soo iibso ULTRA XPS iyo habka aan u helno dhagaystayaal cusub: Freak Hardocore LinuxSESSUAL!
Ubuntero, taasi waa sida saxda ah ee aan ula jeedo mishiinka.
i7, 8GB RAM, 256GB SSD th ..waxaa loogu talagalay ciyaar gamer, maahan horumariye, gaar ahaan kahadalka OS iyo qadarka RAM.
ma gamer, horumariyaha xirfadle.
Soo-saare xirfad-yaqaan ah iyo xitaa Maamulaha Macluumaadka qalabkaas oo kale ah ayaa aad u xaddidan.
Tusaale: Mashiinka wuxuu ahaa core i5 4gb 512 GB oo HHDD ah oo leh windows windows Xp, wuu ka gaabis badnaa udubkayga i3 ee Windows 7 ee 4gb ee wan.
Waan ogahay inay labadooduba lahaayeen daaqado laakiin midkood XP iyo midka kale 7. Iyo xudunta i5 aad ayey ugu fiicnayd in la ciyaaro? Waxaa laga yaabaa, laakiin xitaa waxay qaadatay waqti dheer in la bilaabo sababtoo ah tirada badan ee keydadka macluumaadka ee ay haysatay iyo tirada barnaamijyada lagu soo saaray VB.NET oo aan ahayn wax uun waxaan xusuustaa xaashiyaha isweydaarsiga oo leh interface la mid ah kan Microsoft Office 2007, waxay miisaankeedu ahaa 1gb iyada oo aan la raacin xogta. Waxaan kaala hadlayaa 2 ama 3 sano ka hor waa iska cadahay in horumarayaasha cusubi maanta u baahan yihiin wax badan oo aan si sax ah u ciyaarin. Sidoo kale naqshadaha iyo injineerada ayaa gaabin kara mashiin leh 8 gb wan.
OJO ”waxay u heellan tahay horumariyeyaasha iyo dad xirfad leh oo leh qiime tixraac ah”
Iyo tan iyo goorma ayaa Ubuntu u tahay distoor loogu talagalay horumariyeyaasha? Waan ka xumahay inaan si heer sare ah uga soo baxo su'aashayda, laakiin Uma aan tixgelinaynin Ubuntu inay tahay wax loo yaqaan 'development' tan iyo markii Ubuntu ay maamusho xaalad keyd qaboojiye ah muddo dhan 6 bilood.
Taasi waa in la yiraahdo haddii aan ahay Python iyo Ruby ama horumariyaha PHP oo ay dhacdo in nooc cusub oo ka mid ah luqadahaani soo baxo haddii aan joogo Ubuntu waa inaan sugaa nooca soo socda ee Ubuntu si aan ugu soo baxo ku raaxayso nooca cusub, halka Fedora ama Arch ay kaliya arrintu tahay "cusboonaysiinta sudo yum" waana intaas, waxaad isticmaali kartaa noocyada hadda ee baakadaha iyo barnaamijyada luqadaha.
Taasi waa sababta aan u idhaahdo Ubuntu horumariyayaashu ma socdaan! ..
Ubuntu waxaa loogu talagalay isticmaalaha ugu dambeeya, isticmaalaha saaxiibtinimada leh ee ku xira internetka wuxuu dhagaystaa muusikada oo uu daawadaa fiidiyowyada ... Haddii aad runtii rabto inaad horumariso, waxaa fiican inaad u wareegto wax yar oo firfircoon oo firfircoon marka la eego xirmada iyo cusbooneysiinta luqadda.
Sababta adduunka oo dhan, Fedora ama OpenSUSE… Maalin maalmaha ka mid ah waan la macaamili doonaa Arch… Ubuntu aad ayey ugu fog tahay QODOBKAYGA RA'YIGA inuu noqdo barxad horumarineed.
Ku jawaab Iván Barra
Sug saaxiib…! Marwalba maaha inaad haysatid noocyada ugu dambeeya ayaa lagula talinayaa, markaa tallaalada halkaas ma tagayaan. Horumariyayaashu daruuri kama aha inay isticmaalaan noocyadii ugu dambeeyay ee xasilloonaa laakiin kuwa caadiga ah; Marka laga hadlayo Python, Ubuntu 12.10 wuxuu ku yimaadaa asal ahaan 3.x iyo xaqiiqda, jaangooyada loo isticmaalo meel kasta, xitaa xirmooyinka, waa 2.7; Fedora wali waxay isticmaashaa 2.7 waxayna leedahay nooca 3.x keydkeeda, sida Ubuntu oo kale.
Xaqiiqdii, waad layaabi doontaa qadarka xirmooyinka horumarka ee Ubuntu haysato iyo kuwa kale oo aan lahayn: node.js, CoffeeScript, npm, waxyaabo badan oo badan oo aan xitaa maskaxdaada dhaafin ...
Arch in la horumariyo? Fiican in la gooyo ukun, waa wax aad looga xumaado oo waxbadan cusbooneysiiya, sidaa darteed ilaalinta jawi deggan (macnaha noocyada) ma sahlana sida dadka qaarkii aaminsan yihiin.
Deegaanka xasilloon? Ubuntu? waa hagaag, waxay kuxirantahay nooca ay doontaba ha noqotee, 12.04 waa qumman tahay, 11.10 iyo 12.10 pfffff, sifiican looma xuso, laga soo bilaabo kabaha ugu horeeya ee cilladaha saafiga ah, laakiin waxaan ula jeedaa meesha aad rabto inaad nidaamka kahesho, waligaa waad ogtahay jihada ee Ubuntu, isticmaalaha ugu dambeeya, in kastoo aysan macnaheedu ahayn in waxyaabo kale la qaban karo, in kasta oo shaqsiyan aan door bidayo inaan ka shaqeeyo "Fedora - CentOS - OpenSUSE" (qaybinta aan u isticmaalo kormeerka fulinta: Nagios, Nagvis, PNP, Centreon, Cacti, iwm.) Natiijada aad uga wanaagsan oo xasilloon, dhowr jeer oo isku dayay ubuntu - debian (saafi ah oo fudud) ama nidaam kale oo ku saleysan .deb, waxaan ahaa guuldarro guud.
Hadda, sida Nano yidhi, xagga dhadhanka, midabada.
PS: Arch Weligay iskama dayin, ma aqaano inay caajis tahay, waqti, cabsi, in kasta oo aan arko inay dad badani xalliyeen arrinta Distro-boodboodka. Maalin…
Waxay tahay in 12.04 ay tahay nooca xasilloon ee Ubuntu, noocyada dhexdhexaadka ah ee u dhexeeya LTS's waxay ku dhici karaan cilado tan iyo markii Canonical uu soo bandhigo waxyaabo badan oo tijaabo ah.
Waxaan ku horumaraa Fedora. Horumarinta qaanso-furka runti waxay noqon kartaa dhibaato, waan xaqiijinayaa xD
Maya. Noocyada 'LTS' waa noocyada Ubuntu sida kuwa kale, farqiga ayaa si sax ah ugu jira taageerada la dheereeyay, maadaama mudnaanta la horumariyo isla waqtigaas iyo isla duruufaha la midka ah qaybaha kale, sidaa darteed way soo bandhigi karaan dhibaatooyin la mid ah nooc kasta oo kale. Kadib 8, 10, 12 ama 24 bilood kadib, mahadnaq dib-u-habeyn lagu sameeyay, waa inay ka xasilloon yihiin noocyada dhexdhexaadka ah, laakiin ma jiraan wax intaa ka badan, calaamadda LTS macnaheedu ma aha xasillooni ku dhalasho laakiin waqti dheer oo taageero ah, marka loo eego Waqtigu wuxuu ku lug leeyahay dib-u-eegisyo badan, taas oo waqti ka dib keenta qaab deggan oo ah Ubuntu.
Waad khaldan tahay, oo haddii aadan rumaysan, ka akhriso wiki:
1. Waxaan aad uga dhawrsan nahay xirmadeena isku biirida Debian, si toos ah ayaan ula qabsaneynaa tijaabada Debian, halkii aan ka dajin laheyn Debian.
2. Waxaan bilaabeynaa inaan xasilino sii deynta goor hore anagoo si weyn u xadideyna tirada astaamaha cusub. Waxaan dooran doonnaa astaamaha aan ku duubno sii deynta LTS, iyo kuwa aan ka tagno oo u oggolaanno adeegsadayaasha inay ikhtiyaar ahaan u soo dejistaan ​​una adeegsadaan kayd gaar ah.
3. Ka fogow isbeddelka qaab-dhismeedka illaa iyo inta suurtagal ah, sida beddelka qaab-dhismeedka codsiyada, maktabado badan oo laga beddelayo, ama isbeddellada nidaamka (tusaale: soo bandhigidda KMS ama hal-DeviceKit ma noqon laheyn isbeddello ku habboon LTS).
Marka la soo koobo, waxay aad uga dhawrsan yihiin xirmooyinka ay soo bandhigaan, markay ka baxayaan nooc aan LTS ahayn oo loo yaqaan 'LTS' waxay diiradda saarayaan xasilinta xirmooyinka oo aan soo bandhigin astaamo cusub oo laga fogaado isbeddelada qaabdhismeedka halka ay suurtagal tahay.
"12.10 pfffff, si fiican looma sheego"
Nasiib ayaan lahaa markaa, server-ka guriga ee ku shaqeeya Ubuntu Server 12.10 (oo loogu talagalay iswaafajinta waxtarka badan) illaa iyo hadda waa qumman yahay, wuxuu lahaa 2 ama seddex buudh tan iyo markii aan ka cusbooneysiiyay 12.04 LTS waxayna ahayd waqti dheer 37 maalmood.
Waxaan ahay dameer: ​​17, toddoba iyo toban iyo toddobo maalmood oo wakhtiga la joogo ah 😛
Maaha sidaas, ugu yaraan maahan had iyo jeer. Horumarinta waxaa badanaa lagu sameeyaa nooc gaar ah, ha ahaato Python, ruby, Java ama luqad kasta. Noocaasina badanaa waa mid leh heer balastar cayiman; waa inay jirtaa sabab aad u wanaagsan oo loo adeegsado noocyadii ugu dambeeyay. Waxaan ku horumaraa Python waxaanan isticmaalaa noocyada la socda Debian 6, taas oo ah waxa ku jira server-yada wax soo saarka. Xarumaha shaqada waxaa ku yaal noocyo kala duwan oo ah Ubuntu iyo Debian Testing (iyadoo loo eegayo mid kasta doorbidkiisa), oo leh noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'Python',
laakiin waa inaan hubinno inay la shaqeyneyso Python 2.6 oo ah waxa ku jira wax soo saarka.
Waad saxantahay Tijaabada debian ayaa kafiican ama archlinux doorbidayaa sii deynta duubista. markaa ma jiro fedora. XD
Sidee tahay waxaan u maleynayaa inaad ubuntu ku lahaan doontid heshiis qaar ka mid ah Canonical, anigu garan maayo hubaal.
Inta soo hartay, ka saar ubuntu oo dhig distro aad jeceshahay
Guud ahaan faallaynta, runta xoogaa way adagtahay, ok waa qaali, laakiin qof waa inuu bilaabo inuu jabiyo astaamaha; in kastoo sidan aan shaki uga qabo in la sameyn doono, waa inaan qiraa ...
Waxaa jira xulashooyin aad u wanaagsan, soosaarayaashu waxay soo bandhigi karaan qalab la heli karo qof walbana wuxuu u abuuri karaa barnaamijyadooda barnaamijyada loogu talagalay waxyaabaha ay doortaan, Ubuntu hubaal, waxaa laga yaabaa in Fedora ama Suse ay u furi karaan niche inay noqdaan shirkado saameyn leh, laakiin ma ahan sida Canonical ee goobaha ganacsiga guud. .
Wixii aan ka arko, waxaan u maleynayaa in shirkadaha yar yar ay bixiyaan qiimo jaban Ultrabooks noocyo kala duwan ah, abuuraan labtop-kooda sare iyo kuwa hoose dhammaantood, diirada saaraan iyaga… ilaahay waa mid aad u badan, oo aad u badan oo aan wax ka qori karo. Waan arki doonaa waxa soo baxa.
Waxay ugu dambeyntii hoos u dhigeen qiimaha $ 1449 sida aad ku arki karto bogga dalabka: http://www.dell.com/us/soho/p/xps-13-linux/pd
Aan aragno, si aanan uga jawaabin faallooyinka shaqsi ahaan waxaan isku dayi doonaa inaan sameeyo mid kooban:
@DanielC: Haddii aad si dhow u fiirsato, qaabeynta Ubuntu iyo Windows si sax ah iskuma mid aha, Ubuntu wuxuu la yimaadaa 8GB oo RAM ah iyo haddii aad dhib ku qabtid inaad hubiso isku xirnaanta wararka asalka ah ee PCWorld, waxaad arki doontaa in kororkan uu RAM-ka waxaa loo sameeyay si sax ah codsi ka yimid horumariyeyaasha isticmaalaya xirmooyinka tijaabada. Marna lama dhihin qaababkan waxaa loogu talagalay ciyaartoy, HAA, horumariyeyaasha xirfadleyda ah waxay ubaahanyihiin qalabkan inuu shaqeeyo qaar badan oo kamid ahna waxay diyaar uyihiin inay bixiyaan qiimaha qalabka maxaa yeelay iyaga ayaaba ah qaab shaqo, maahan madadaalo . Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira qaabeyn aasaasi ah oo la soo baxeysa 4GB oo ka jaban.
@Mllti: Xaqiiqdii asxaabtiisa Xykyz wuu ku saxanyahay waxa uu leeyahay, sida caadiga ah milkiilayaasha dhamaan software-ka qashinka ah ee ku yimaada horudhaca Windows-ka ayaa bixiya astaanta lagu daro, ogow inay dhamaantood yihiin "tijaabooyin" noocyo ah waxay u adeegaan inay kugula qabsadaan isticmaalkooda ka dibna lagugu qasbo inaad bixiso shatiyada isticmaalaha. Intaa waxaa sii dheer, Microsoft waxaa lagu eedeeyay inay heshiis qarsoodi ah la gashay shirkado waaweyn oo loo maleynayo inay ku lug leeyihiin lacagaha laga helo Microsoft si loogu adeegsado Windows wax u dhimaya OS kasta oo kale, nasiib daro tan lama xaqiijin ilaa maanta.
@Xykyz: Waxaan gebi ahaanba ku raacsanahay soo jeedintaada.
@Alf: Aniga ra'yigayga, tanina waa mid mala awaal ah, oo lagu arkay culeyska isku habeynta koox GNU / Linux, DELL waxay ku qasbanaan laheyd inay u doorato distoor, sikastoo ay ahaataba, qaabeynta kooxda guud ahaan waxay daruur u tahay wada shaqeynta ka dhaxeysa dhinacyada, halkaas oo ay tahay inay labaduba gaaraan go'aanno fulineed si loo gaaro himilada la soo jeediyey. Nidaam kasta oo noocan ah, kacsanaanta go'aan qaadashadu waa lagama maarmaan, iyo intaan ogahay, waxa kaliya ee suurtagalka ah ee suurtogalnimadaani waa Ubuntu, maadaama ay leedahay qaab dhismeed maamul oo leh awooddaas, halka inta hartay ee kale, loogu talagalay joogtada ah, wuxuu sameeyaa go'aamada urur ahaan iyo is afgarad, taasoo dib u dhigaysa iyaga. Waxaan u maleynayaa inay taasi fure u tahay sababta Ubuntu loogu doortay distoorka, in kastoo aanan meesha ka saarin suurtagalnimada noocyo kale oo heshiisyo ah oo u dhexeeya DELL iyo Canonical.
@nano: Waxaan ku raacsanahay inay aad ufiican tahay sumad sida DELL ah inay bilawdo jajabinta, laakiin uma maleynayo inay ku dhamaan doonto isku day fashilmay. Waa lagama maarmaan in fiiro gaar ah loo yeesho hal faahfaahin: qaybta suuqa ee kooxda ay su'aashu ka taagan tahay bartilmaameedka, horumariyeyaasha xirfadleyda ah, waan arki doonaa sida ay uga falceliso.
Marka laga hadlayo qiimaha, waa run in loo qaadan karo mid sare, laakiin la soco in uu yahay buugga ultrabook, mana aqaano wax qalab ah oo qaybtan ka mid ah oo raqiis ah, kaliya maahan kuwa sumaddan, ka hubi HP, Samsung, iwm, iyo deegaanka ay qiimuhu ku dhaqaaqayaan waa mid aad isugu eg.
Hadda, waxaa jira arrin sida aan qabo ay tahay mid aad u habboon oo waa kuwan soo socda: laga bilaabo qaybaha ugu muhiimsan ee qalabka qaabeynta, waxaan ula jeedaa saldhigga 'Chipset' (Chipset), qalab si buuxda ula jaan qaada Ubuntu 12.04, oo leh darawallo u dhigma, markaa, qaabeyntaas la og yahay, ma aha wax aad u adag in laga helo kombiyuutarro kale oo ka raqiisan isla shirkaddan soo saaraha ah, oo wadaagta isla qaabeynta qalabka aasaasiga ah, iyada oo la hubo hubaal ahaan inay taageeri doonaan Ubuntu. 12.04, maadaama ay isticmaali karaan isla darawallada. Xaqiiqdii, waqti ka hor ayaa igu qasbay inaan sameeyo falanqeyntan si aan u xusho laptops-ka HP ee mashruuc u baahan taageerada GNU / Linux waxaana ka sameeyay qaabeynta aasaasiga ah ee nooc gaar ah oo soo saaruhu dammaanad u lahaa darawallada , Gaaritaankeeda ugu dambayntii waxay ku shaqeysay dhibaato la'aan qaabkii aan soo xushay, oo ka duwan midka "dammaanad qaaday" ee HP.
Waan ka xumahay biilka, laakiin waxaan isku dayay inaan ka jawaabo faallooyinka badankood, qof walba, aad ayaad ugu mahadsantahay joojinta iyo fikradahaaga maadaama ay dhammaantood gacan ka geystaan ​​faham wanaagsan arrimahaas.
Laptop leh Linux oo ka qaalisan Windows-ka iyo qiimaha MacBook-ga
Taabo sankaaga …… Dell
Ma jecli astaantaas.
Hagaag, shaqsiyan ma jecli sidoo kale midkood, laakiin dhadhanka looma falanqeeyo ...
Waad ku mahadsantahay joojinta
Qiimuhu waa waxa kaliya ee aanan jeclayn gabi ahaanba, laakiin sikastaba, hindise wanaagsan oo loogu talagalay Isha Furan: D!
Paulo carmona dijo
Waxaan rajeyneynaa inay tahay albaabka fursadaha wanaagsan ee adduunka Linux. Weligaa ma awoodi doontaa inaad iibsato laptop wanaagsan oo aan lahayn OS? Sida iska cad qiimo aad u fiican.
Jawaab Paulo Carmona
Waxaa jira noocyo badan oo iibiya moodeellada aan lahayn OS waxaan lahaa Gigabyte q1105m, Intel su4100, 4GB wan oo wan iyo 320GB HDD. USD $ 360. Waxaan u adeegsaday Fedora 15 iyo Windows 7. hada waxaan haystaa Asus N53SV, core i5, 8GB ram, GT540m 1GB DDR3, 750GB hybrid HDD.
Waxay sidoo kale timid iyada oo aan SO USD $ 1000. Waxaan ugu isticmaalaa fedora 17 iyo windows 7. Dell sidoo kale waxay bixisaa isku mid iyo in ka badan ma xasuusto.
Gawaarida kiiboodhka ee Elementary OS
Dugsiga Hoose ee Graphite: Mawduucaygii ugu horreeyay ee Dekorator